मेरो दिलमा तिमी सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १९ जेठ । गायक झलक विवशको नयाँ गीत ‘मेरो दिलमा तिमी छौ’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक विवश स्वयम्को शब्द तथा
नेपालको गौरवगाथा : ‘नेपाल-गाथा’ गीतिनाटक मञ्चन हुने
काठमाडौं, १९ जेठ । नेपालको समग्र गौरवगाथा समेटिएको ऐतिहासिक गीति नाटक ‘गौरव–गाथा’ जेठ २० गते सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर) जमलमा मञ्चन हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थिति रहने
२७ गीति एल्वम र दुई पुस्तक एकैसाथ सार्वजनिक
काठमाडौं, १९ जेठ । गीतकार बिबी थापाको एकैसाथ २७ गीति एल्वम लोकार्पण गरिएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २७ गीति एल्वमसँगै दुई पुस्तकको लोकार्पण गरेका थिए । सम्भवत यो विश्वकै
सर्लाही, १९ जेठ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बक्स अफिस प्रणालीले पारदर्शी समाज र व्यावसायिक शुद्धता कायममा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकास्थित वीणा चलचित्र मन्दिरमा
‘सुन माया’ भन्दै रुकमानको पछि-पछि सुष्मा ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १४ जेठ । एउटा यस्तो गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा अभिनय गर्ने दुवै गाउने कलाकार हुन् । गायिका तथा सञ्चारकर्मी सुष्मा राईको स्वरमा ‘सुन माया’ बोलको गीत
नेपाली संगीतमा ‘रिल’सँगै हराएको ‘फिल’
एमपी सुब्बा स्व. स्वरसम्राट नारायण गोपालका गीतहरु कति कालजयी छन् । ‘रिल’मा उनिएका मर्मस्पर्शी ती गीतहरु सुन्दा अझै उनी बाँचिरहेझैँं लाग्छ । र, उनी नारायण गोपाल भए । त्यस्तै, भक्तराज
बिहेको साइत अहिलेसम्म जुरेको छैन-दुर्गा खरेल, गायिका
‘काले काले’जस्ता चर्चित गीतका गायिका दुर्गा खरेल अहिलेसम्म सिंगल छिन् । ‘न मेरो अफेयर्स छ, न त डेटिङको रहर नै’ उनी भन्छिन्, ‘म त मागी विवाह गर्ने हो । त्यो
आफूलाई निखार्दै ‘मिस्टर एण्ड मिस एसईई ग्ल्याम’का प्रतियोगी
काठमाडौं, १३ जेठ । ‘मिस्टर एण्ड मिस एसईई ग्ल्याम–२०१९’ प्रतियोगी केही साता देखि प्रशिक्षणमा छन् । प्रतियोगिताको अन्तिम स्पर्धामा शिर्ष उपाधि जित्ने उदेश्य सहित उनीहरु प्रशिक्षणमा दिनरात मिहिनेत गरिरहेका छन्